Ity no filokana an'ny Samsung miaraka amin'ireo sainam-pirenena hijoro amin'ny Apple Store | Avy amin'ny mac aho
Rehefa nanokatra ny Apple Store voalohany tany Cupertino tao Apple i Apple Famonoana iray tsy misy fetra Tsy nieritreritra mihitsy izy fa ny fananana ireo karazana magazay ireo dia ho lasa toerana alehan'ny mpanaraka ny paoma fa tsy hividy vokatra fotsiny. Araka ny fantatrao, ireo fivarotana ireo dia toerana misy mpanaraka afaka mandray fampianarana, atrehan'ny manam-pahaizana ary mazava ho azy, mba ho toerana fivahinianana masina ho an'ireo mpanaraka mazoto indrindra.
Ireo orinasa toa an'i Samsung, Sony na Microsoft, ankoatry ny orinasa lehibe hafa, dia nahatsapa izany ary nanomboka niasa tamin'io làlana io. Saingy, ilay iray izay nandray azy io tena matotra tokoa dia i Samsung ary Efa hitantsika sahady ny toetran'izy ireo voalohany na fivarotana manokana, karazana fivarotana izay tian'izy ireo hijoro amin'ny Apple Store.
Ankehitriny, Samsung dia naniry ny traikefan'ny mpampiasa ao amin'ireto magazay ireto ho milentika araka izay azo atao. Betsaka ny olona tonga ka tsy afaka mividy ireo vokatra ianao tahaka ny mitranga ao amin'ny Apple Store. Ao amin'ny fivarotanao inona ho azonao atao ny manandrana amin'ny fomba tsy hay hadinoina ny fiasan'ny fitaovanao samihafa ary koa ny fahazoana fampianarana sy fiofanana.
Araka ny hitanao amin'ny sary izay ampidirinay ao amin'ilay lahatsoratra, ny fivarotana resahinay dia manana faritra samihafa izay ahafahanay manolotra faritra iray misy efijery misy rihana telo miaraka amfitefera ho an'ny olona sivifolo na tionelina iray izay ampidiro ao, ny mpampiasa dia afaka mahita ny sarin'ny Instagram ao anaty tionelin'ny efijery.
Ilay fivarotana resahina eto miantso ny tenany hoe 837 ary ao amin'ny distrikan'i Fonosin-kena ao New York. Ny anarany no isan'ny toerana misy azy. Izahay dia hiatrika ny fotoana voalohany hijoroan'ny Samsung amin'ny fomba eken'ny Apple sy ny azy Apple Store Ireto fivarotana ireto koa dia misy fivarotana kafe, galerie kanto ary studio multimedia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Ity no filohan'i Samsung miaraka amin'ireo sainam-pirenena hijoro amin'ny Apple Store
OS X 10.12 dia mahazo laza eo amin'ny tranonkala